Latest firfircoon Isbaanish | eactivo | Isbaanish soo guurey
Waxaan leenahay NEWS on the web!
Waxaan ku daray 3 sadaro iyo 3 links Isbaanish cusub si Firfircoon. Halkaas oo explained ay yihiin:
“Your hooyo”: turjumi ka kooban hantida Isbaanish, laakiin layliyada jirin! Waa in ay column xaq, kor ku xusan “Waxaan doonayaa in aan ka heli…”.
Ardayda of Aduunka: si ay u muujiyaan shaqada aad qaban fasalka Isbaanish. Qaybtani waxa ay ka heli karaan in ay Taxaalka Central, kor ku xusan “Records” iyo hoos ku “Podcast Isbaanish Firfircoon”.
Isbaanish Pictures: muujiyaan images of Spain laylisyo aad u ogaato dhaqankeena. Waxaan bilaabay by ee Bbc of beelood ee, laakiin ay sii wado mawduucyada kale ee. Waxaa kor u yahay, in the madaxa page.
Links ama Links khaanadda midige:
Memrise: Koorsooyinka lacag la'aan ah si ay u bartaan Isbaanish isticmaalaya Ingiriisi. Link Tani waa in “Jimicsiga Isbaanish”, kor ku xusan “Literacy”.
Purorrelato2013: micro-sheekooyin ku saabsan Africa u qoran tahay, waayo, aniga microstories Contest House of Africa.
Whatsapp-saaxiibada: blog ee Isbaanish iyo Ingiriisi for dariiq madadaalo ay u bartaan Isbaanish ah.
Published in: Links, Isbaanish Pictures, Wuxuu akhrinayaa, Books, News
Tags: sawirka , News , Shaqada Ardayga